Instagram ပေါ်ရှိအဆက်အသွယ်များကိုအသံတိတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ Androidsis
Instagram သည် Android တွင်လူကြိုက်အများဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ လူမှုကွန်ယက်သည်အထူးသဖြင့်အင်္ဂါရပ်များစွာကိုမိတ်ဆက်ပေးသောကြောင့်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုများရရှိခဲ့သည်။ ဒီနှစ်အတူတူပင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များအနက်မှတစ်ခုမှာ စကားမပြောသောသုံးစွဲသူများ။ ဒီလုပ်ဆောင်မှုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဆက်အသွယ်၏စာပမြေားကိုမမြင်နိုင်တော့ပေ။
လူတယောက်နောက်ကိုလိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာငါတို့လုပ်နိုင်တဲ့အရာပဲ။ ဒါပေမယ့်သူတို့တင်ထားတာတွေကိုမမြင်ချင်တဲ့အချိန်ရှိနိုင်တယ်။ ဤသို့လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်မေးမြန်းနေသောအဆက်အသွယ်ကိုနှုတ်ပိတ်ရန်ဤဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ အောက်ပါ ကျနော်တို့အဆက်အသွယ်တိတ်ဆိတ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုသင်ပြ.
ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ ငါတို့နှုတ်ပိတ်သွားမယ့်သူရဲ့ Instagram profile ကိုအရင်ရိုက်ရမယ်။ ပြီးတာနဲ့အထဲမှာကျနော်တို့ကိုကြည့်ပါ ညာဘက်ထိပ်မှာဒေါင်လိုက်အစက်သုံးခုထွက်လာတယ် မျက်နှာပြင်မှ။ ပြီးရင်သူတို့ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ရွေးချယ်စရာများပါသောစာရင်းပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားသောတိတ်ဆိတ်စွာနေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအဆက်အသွယ်အားနှုတ်ပိတ်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများစွာရှိသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့စာမူတွေအားလုံးကိုပိတ်ထားလို့ရတယ်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ် ၀ င်စားသည့်အရာကိုရွေးချယ်ရမည်။
ထို့နောက်ရွေးချယ်ထားသောရွေးစရာကိုနှိပ်ပါနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုယခုပြီးဆုံးသည်။ ဤအဆင့်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မေးခွန်းအားဆက်သွယ်မှုကိုနှုတ်ပိတ်လိုက်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာလူတစ် ဦး သည် Instagram တွင်တင်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏စာစောင်တွင်ဖော်ပြထားသောစာပေများကိုကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ရပါ။ သူတို့ဘာတွေတင်လိုက်တယ်ဆိုတာကြည့်ဖို့၊ ငါတို့ကသူတို့ပရိုဖိုင်းကိုထည့်ရမယ်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့စာပေတွေကငါတို့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးရင်သူတို့အကြောင်းကိုမေ့သွားမှာပါ။ အဆက်အသွယ်နှောင့်အယှက်သည်နှင့်သင်၏နောက်လိုက်ပါလျှင်, \_ t သင်အလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သည်.
၎င်းသည်အသုံးပြုရန်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအလွန်အဆင်ပြေသည်။ ၎င်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသောတစ်ခုတည်းသော application သည်မဟုတ်ပါ။ တွစ်တာကဲ့သို့သောအခြားသူများ သူတို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Instagram ပေါ်မှအဆက်အသွယ်များကိုအသံတိတ်အောင်လုပ်နည်း